Fanafody any Sri Lanka ~ Journey-Assist- Toeram-pitsaboana, fanafody. Ayurveda
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fanafody any Sri Lanka
Klinika any Sri Lanka
Ivontoerana ara-pitsaboana eo an-toerana (kaonty tena tsotra indrindra an'ny klinika monisipalintsika) any Sri Lanka dia azo jerena ao amin'ny tanàna rehetra. Saingy any dia tsy misy olana ara-pitsaboana tena lehibe izy ireo - fanelingelenana sy fanalan-javatra, aretina catarrhal malemy, sunburns, allergie malefaka ary aretina hafa izay tsy mitaky ny fampiasana ireo fitaovam-pitsaboana tsy miankina (toy ny x-ray).
Raha misy ny fanapoizinana mahery vaika na misy ratra mafy kokoa noho ny tapaka na fanitsakitsahana, na mba hamahana ny olana momba ny nify, dia mila miditra any amin'ny hopitaly lehibe misy fitaovana ilaina rehetra ianao. Misy fitaovana toa izany ao Colombo sy Galle. Saingy mety hahita hopitaly any amina toeran-kafa hafa na lehibe kokoa ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny fanafody eto amin'ity firenena ity dia novolavolaina tsara amin'ny fenitry ny Azia Atsimo Atsinanana. Misy toeram-pitsaboana malalaka sy roa fandoavam-bola be. Mazava ho azy fa avo kokoa ny ambaratonga karama. Na izany aza, tsara kokoa ny hanao politika fiantohana izay hampihena ny vidin'ny fitsaboana.
Fanafody any Sri Lanka. Pharmaphical Sri Lankan
Ampy ny fivarotam-panafody any Sri Lanka. Saika hivarotra fanafody daholo izy ireo. Saingy, ny ampahany lehibe amin'izy ireo dia tsy mahasalama (na hatramin'ny 60% ny zava-mahadomelina rehetra) na ny vokatra fanafody avo lenta aza, na dia somary ambany ihany aza ny vidiny. Amin'ny ankapobeny, tsy azo atao ny mividy fanafody any Sri Lanka mihitsy. Torohevitra ianao raha entinao miaraka amin'ny fanafody fanafody.
Ny fikarakarana fitsaboana maika dia matetika omena eto haingana sy manam-pahaizana tsara. Matetika, miaraka amin'ny olana ara-pahasalamana madinidinika, ny vahiny iray amin'ny hotely dia miantso ny dokoterany "azy", izay miasa amin'ity hotely ity.
Fiarovana ara-pitsaboana taloha sy mandritra ny dia
Safidy alohan'ny fitsidihana an'i Sri Lanka. Na izany aza, ny faritra sasany amin'ity nosy ity dia raisina ho tsy azo antoka amin'ny lafiny fahasalamana. Noho izany, ny vaksiny miady amin'ny difteria, ny tazo typhoid, tetanus ary hepatitis.
Hatramin'ny taona 2015 dia resy tanteraka ny tazomoka any Sri Lanka, araka ny porofon'ny fanamarinana nataon'ny OMS. Na izany aza, na izany aza, mbola mijanona eto amin'ity firenena ity ihany ny fiovana samihafa, noho izany dia mandroaka mandritra ny orana, rehefa mandeha amin'ny natiora sy amin'ny alina.
Ireto torohevitra manaraka ireto dia tokony ho arahina:
Fitaovana rano ao Sri Lanka dia tsy mety tanteraka amin'ny fisotroana sy ny fikosehana ny nifinao. Mila mividy rano tavoahangy.
Alohan'ny sakafo dia tokony misasa tànana tsara ny tànanao.
Fanafody nentim-paharazana ao Sri Lanka. Ayurveda
Ayurveda dia fotopampianarana taloha momba ny fahasalamana, fiainana mifanaraka ary mirindra tsara amin'ny vatana sy ny saina. Ny fanaon'i Ayurveda dia atrehin'ireo mpizahatany maro manao fialan-tsasatra any Sri Lanka. Amin'izao fotoana izao, misy manampahaizana manokana 6 miaraka amin'ny diplaoma Ayurveda ao amin'ity firenena ity. Azon'izy ireo atao ny mamantatra ny olana ara-pahasalamana amin'ny olona tsirairay, manombantombana ireo toetoetran'ny tsirairay ary mifantina ny fitsaboana tsara indrindra. Ayurveda no mampiavaka ny fampiasana singa voajanahary manokana - fanomanana, ny akora mamboly dia zavamaniry sy ny dobo. Ny programa Ayurvedic manokana dia mikendry ny fanatsarana ny famokarana endorphins, ny oxygenising ra, hanafaka ny tebiteby, mamerina ny fandanjalanjana ny rafi-pitatitra sy ny tsy fahampiana.